काठमाडौं उपत्यकामा देखियो यस्तो सङ्केत, आखिर जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो - SandeshMedia.com
वैदेशिक रोजगारीको लर्को: ११६ देश जान जान श्रम स्वीकृति दिइयो, सबैभन्दा बढीको रोजाई कतार
तीन वर्षदेखि श्रीमान् विदेशमा छन् । देवर सधैँ घरमा आइरहन्थे । मदिराले लठ्ठ भएकाले बेला के–के भयो के के
ग्राण्डी अस्पतालले उत्कृष्ट भनेर पुरस्कृत गरेको डाक्टर ‘नक्कली’ भएको प्रमाण
अहिलेसम्मको सबैभन्दा गोप्य योजना यसरी खोले राजेश हमालले जीवनमै पहिलोपटक (भिडियोसहित)
भाेली देखी १८ गतेसम्मकालागी अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय (बिज्ञप्ति सहित)
मेमोरी किङ का नाममा एकपछि अर्को ठगी धन्दा , विजय शाही पछि अर्पण शर्माको पोल खुल्यो
कतार जाने यात्रुका लागि क्वारेन्टिन र खोपबारे यस्तो नयाँ नियम
काठमाडौं उपत्यकामा देखियो यस्तो सङ्केत, आखिर जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो
२४ असार २०७८, बिहीबार १५:२१
काठमाडौँ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को जोखिम बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । मुलुकमा दोस्रो लहरको कोभिड–१९ उच्च बिन्दुमा पुगेर सङ्क्रमण क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहँदा पछिल्ला केही दिनको तथ्याङ्कले बढ्ने आशङ्का छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्क्रमण दरमा वृद्धि भइरहेकाले जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी यतिखेर सर्तक हुन सकिएन भने गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने बताउनुहुन्छ ।
“जोखिमयुक्त हुँदाहुँदै जनजीवन सहजीकरण गर्न निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएको हो, सङ्क्रमण सबै सकियो भनेर होइन”, डा. अधिकारीले भन्नुभयो, “अझै हाम्रो व्यवहार, शैली परिवर्तन गर्नु हुन्न, सबै मापदण्डको पूर्ण पालनामा नचुकौँ ।” मन्त्रालयले अघिल्लो महिनामा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी तेस्रो लहरको सङ्क्रमण आउन सक्ने र त्यस समयमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्नसक्ने आँकलन गर्दै अस्पताललाई आवश्यक शय्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । जनस्वासथ्यविद् डा .रविन्द्र पाण्डे प्रजाति नै परिवर्तन भएर तेस्रो लहर आउनसक्ने भन्दा पनि यही डेल्टा प्रजाति नै वृद्धि हुने अनुमान गर्नुहुन्छ । भारतमा समेत सङ्क्रमण बढ्न थालेकाले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालमा पर्ने वितगको उदाहरण छ ।
दोस्रो लहरको सङ्क्रमण फैलिँदा गएको वैशाख पहिलो हप्तादेखि बाग्लुङ जिल्लाबाट निषेधाज्ञा शुरु भएको थियो । वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकालगायत सङ्क्रमण फैलिएको धेरै जिल्लामा आदेश जारी गरिएको थियो । वैशाख र जेठ महिनामा ह्वात्तै बढेको असार लागेसँगै घटेपछि विस्तारै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न थालिएको हो ।
यसरी निषेधको आदेश खुकुलो बनाउँदा मानिसमा सङ्क्रमण नै हराइसकेको भन्ने सन्देश पुगेकाले समस्या बढ्ने डा पाण्डेको विश्लेषण छ । उहाँ २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्क्रमण दर रहेकै बेला निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइनु जोखिम हटेर नभइ आर्थिक र मानवीय गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि भएकाले सर्वसाधारणले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्नेमा सुझाव दिनुहुन्छ ।
गृह मन्त्रालकया प्रवक्त जनकराज दाहाल अहिले कुनै पनि गतिविधि गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्डलाई भुल्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ । मानिस आफैँ सचेत भएनन् भने जोखिम स्वाभाविक रुपमा बढ्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले जोखिमको अवस्था हेरेर जिल्लाले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिइएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डेलेका अनुसार अहिले मुलुकका विभिन्न जिल्ला कोभिड–१९ को जोखिमबाट बाहिर गएर निषेधाज्ञा खुलाएको होइन । कूल २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्क्रमण कायमै थियो । थोरै परिवर्तन मात्रै भएको थियो । यो बेला परीक्षणको दायरा साँघुरो र आम जनता पनि परीक्षणमा उत्सुक नदेखिएको पाइएको रासससँगको कुराकानीमा उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँभन्दा गाउँमा धेरै नै सङ्क्रमण रहेको तर परीक्षण हुन नसकेको उहाँको मूल्याङ्कन छ ।
मुलुकमा केहीदिन यता सङ्क्रमण वृद्धिदर बढ्दो छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न मात्र निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको हो । तर बुझाइ फरक पर्दा घाँटी र चिउँडोमा मास्क लगाउने अबस्था देखिन थालेको छ । काम गर्ने क्षेत्रका, तरकारी पसल, अन्य बजारमा काम गर्ने अधिकांशले मास्क लगाएको छैन । त्यसैले सङ्क्रमण बढ्न सहयोग पु¥याएको छ । उहाँको विष्लेषणअनुसार अहिले नै तेस्रो प्रजाति भित्रिने सम्भावना भने कम छ । तर अहिले कै डेल्टा प्रजाति बढेर तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना छ ।
मुलुकमा खोप पनि पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन । अहिलेसम्म २६ लाख मानिसले पहिलो मात्रा र साँढे ८ लाख मानिसले दोस्रो मात्राको खोप लगाएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो बेला धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्दथ्यो । त्यो सम्भव नभएपछि अबको लहरमा खोप नलगाएकाहरू बढी जोखिममा रहने उहाँको जिकिर छ ।
जोखिम रोक्ने मुख्य उपाय भनेको भिडभाड रोक्नु र मानिसमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गराउनु हो । उहाँ भिडभाड हुने ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी आवश्यक परे जरिवाना नै लगाउन सुझाव दिनुहुन्छ । “ठाउँठाउँमा जनचेतना पनि आवश्यक छ, थाहा हुँदाहुँदै पनि मासिन सचेत भएका छैनन्, आफूलाई नपरेसम्म नजरअन्दाज गर्ने हाम्रो सोच छ, त्यो सोच बदल्न जरुरी छ”, डा. पाण्डेले भन्नुभयो । नेपालमा फैलिएको डेल्टा प्रजातिको विश्वभरी नै प्रभाव छ । यो झण्डै १०० देशमा फैलिएको छ । डेल्टालाई रोक्न धेरै मुलुक बन्दाबन्दीमा छ । डेल्टा प्लस पनि परीक्षणमा देखिइसकेको छ । अब नरम खालको वा कडा खालको पनि आउन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । राम्रो अध्ययन नहुँदा जोखिम बढ्दो नै छ ।
नेपालमा युवाले खोप नलगाएका कारण उनीहरूसमेत जोखिममा छन् । बालबालिका मात्रै जोखिममा पर्ने होइन । जुनजुन क्षेत्र चलायमान गरियो । त्यसमा नीति, नियम तथा मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन जरुरी हुन्छ । यातायत, मालपोत, कर कार्यालमजस्ता क्षेत्रमा एकदम भिड छ, त्यो भिड कसरी कम गर्ने ? गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । सरकार र नागरिक मिलेर आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्यौँ भने नियन्त्रण सम्भव छ, नत्र अफ्ठेरो अवस्था आउन सक्ने उहाँको ठम्याइ छ । अहिले भारतमा समेत फेरि सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ । भारतमा बढ्नु भनेको नेपालमा पनि बढ्ने सङ्केत हो ।संक्रमको पहिलो लहर र दोस्रो लहर आउँदा पहिले भारतमा आएपछि त्यसको केही हप्तामा नेपालमा महामारी भएको थियो । डा. पाण्डेले भन्नुहुन्छ, “पुनः जोखिम उच्च देखिएकाले हामीले कतै लापरबाही ग¥यौँ की, समीक्षा गरौँ ।”
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १४:३२
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १४:२७
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १३:५७
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १०:१५
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १०:१२